Ezona zimvo zibalaseleyo zokuhombisa ibhodi eyintloko yebhedi yakho | IBezzia
Ezona zimvo zibalaseleyo zokuhombisa ibhodi eyintloko yebhedi yakho
UPau Heidemeyer | 03/04/2021 16:00 | Ikhaya
Ukuba ufuna ukunika igumbi lakho ukubamba okungafaniyo Kodwa awazi ukuba ungayenza njani ngendlela elula ukuze ikunike ezona ziphumo zibalaseleyo, ungayenza ngokuguqula ibhodi ebhodi yombhede.
Kule nqaku sikuxelela wenze igumbi lakho lokulala libukeke ngokwahlukileyo ukulungisa nje i-headboard yebhedi yakho.
Igumbi lokulala lelinye lezithuba endlwini apho lingavumeli ifenitshala eninzi. Into ephambili ngumbhede, olandelwa ziikhabhathi, iilokhwe kunye neetafile ezisecaleni kwebhedi. Kuxhomekeka kuhlobo lokulala, ukuba lulutsha ngakumbi luya kuba nedesika, kwelinye icala, amagumbi okulala aphambili aqhele ukuba nezinto ezininzi.
Ngesi sizathu, siza kwazi ezona zimvo zibalaseleyo zokutshintsha i-headboard yebhedi yakho kwaye siyinike uthintelo olwahlukileyo. Ke, masazi ezinye zeembono zokuhombisa ibhodi eyintloko yebhedi yakho kwaye ujike igumbi lakho libe yindawo oyithandayo.
Kuxhomekeke kubukhulu begumbi lakho, ungongeza isitulo okanye isifuba sedrawer ukugcwalisa nayiphi na indawo engenanto, nangona kunjalo, akusoloko kunokwenzeka. Kungenxa yoko le nto ibhodi yebhodi yentloko yebhedi inokuthatha inqanaba lesiseko kwaye ilinike ukubamba.
1 Yenza igumbi lakho lokulala libe yeyona ndawo intle
2 Khetha ibhodi yebhodi efanelekileyo yebhedi yakho
2.2 Uhlobo lweentloko
2.4 Iitafile ezisecaleni kwebhedi
3 Iingcamango zokuhlobisa ibhodi yebhodi yakho
3.1 Iintloko zebhodi eneefreyimu zeefoto
3.2 Umsebenzi weebhloko eziphambili
3.3 Iintloko zeentloko ezinephepha lodonga
3.4 Ishelfu edityanisiweyo okanye ishelufu
Yenza igumbi lakho lokulala libe yeyona ndawo intle
Kubalulekile ukulala kwindawo emnandi, ngenxa yezizathu ezininzi, kodwa ngaphezulu kwako konke ukonwabela izibonelelo zokuphumla okuhle. I-headboard inokuhamba indlela ende ekufumaneni elo gumbi lihle kwaye limnandi.
Ukuba sinamagumbi afudumeleyo kwaye amnandi siya kufezekisa uthotho lwezibonelelo: Cinga ngokucacileyo, phendula ngokukhawuleza, phucula inkumbulo kunye noxinzelelo. Ukulala kakubi akukuchaphazeli nje ukusebenza komzimba wethu ngokubanzi, kodwa kukwaphazamisa umgangatho wobomi ngokubanzi, intlalontle, umsebenzi kunye nobudlelwane bosapho.
Ukuze igumbi lakho libe nomoya ogqwesileyo kwaye limnandi kangangoko kunokwenzeka, qaphela ezi ngcebiso:
Khetha i-shades ekhuthaza ukuzola. Phakathi kwazo kukho iithoni zokukhanya zesanti kunye nemibala yomhlaba. Iinkuni zisinika umgangatho omkhulu kwaye zithelekisa kakuhle ne-beige, blues kunye nemifuno.
Khetha ukukhanya okuneetoni ezibomvu kwaye kukhupha ukutshona kwelanga. Kule nto kufuneka usebenzise izibane ezingathanga ngqo kwibhodi eyintloko.
Sebenzisa iiragi ezenziwe ngezinto ezinemixholo emnandi njengesilika okanye uboya.
Hlawula ngakumbi ebhedini. Kule meko, kwibhodi eyintloko, nangona kuya kufuneka uhoye ukugoba komqolo wakho kunye neempahla zomandlalo zilula kunye nomqhaphu.
Khetha ibhodi yebhodi efanelekileyo yebhedi yakho
Kulula kakhulu ukulahleka kwindalo iphela yeebhloko. Iindidi zininzi kwaye uninzi lunomtsalane kangangokuba siya kufuna ukuzizama zonke. Kodwa njengoko besitshilo, Siza kusoloko sibona isitayile sendlu yethu ukuze ingangqubani.
Kwelinye icala, mhlawumbi sinika ukubaluleka ngakumbi kwisitayile kunye ne-aesthetics kunokusebenza kwebhodi yentloko. Zombini zibalulekile.
Ukuba ufuna ukuba igumbi lakho lokulala libukeke ngcono, kwaye ukhuseleke kakuhle kwingxolo, enemibala emihle eludongeni kunye nakho konke ukuthuthuzela, gcina le micimbi engqondweni.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba zeziphi izinto ezisetyenzisiweyo kwigumbi lokulala. Kuxhomekeke kukhetho lwakho kunye nohlahlo-lwabiwo mali luya kuba lolunye uhlobo okanye olunye. Ezomthi zezona zisinika ezona mvakalelo zifudumeleyo, endaweni yoko, ungazisebenzisa zentsimbi.
Yibhodi yentloko eyinxalenye yesakhiwo sebhedi okanye enye oyithengayo ngokwahlukeneyo. I-headboard kunye nebhedi zisenokungafani okanye zingadibaniNangona kunjalo, inokudala ukubonwa okuhle kakhulu.
Ke ungakhathazeki ukuba ibhodi yakho yentloko ayifani nebhedi, inokuba kukuchukumisa okufuneka kwigumbi lakho lokulala.
Unokukhetha iifayili zendalo ezifana nekotoni okanye ilinen, kuba umphumo wazo uhlambulukile. Njengakwiithoni ezikhanyayo ukuze zihambelane ngakumbi nolu hlobo lwamalaphu.
Ukuba ukhetha iifayibha zokwenziwa, kuya kuba lula ukuzicoca kunye nokunganyangeki. Kwelinye icala, abo banembonakalo yevelvet baya kuyinika ukubukeka kweklasikhi kunye nokunethezeka. Unokongeza amaqhosha, njengesitayile esineqhosha okanye izikhonkwane emacaleni.
Unokukhetha i-headboard esele inezibane kwitafile esecaleni kwebhedi efakiweyo, oku kuya kubonelela kuyilo kunye nokusebenza. Yintoni egqithisile, uya kuthintela izibane ukuba zingathathi ndawo kwiindawo zokuma ebusuku.
Iingcamango zokuhlobisa ibhodi yebhodi yakho
Emva koko, sikuxelela ezona zimvo zibalaseleyo zokuhombisa ibhodi eyintloko yebhedi yakho. Ngale ndlela uza kufumana isitayile esahlukileyo kwigumbi lakho lokulala ngendlela elula.
Iintloko zebhodi eneefreyimu zeefoto
Ingcinga yanamhlanje esetyenziswa kakhulu. Imifanekiso, iifoto okanye imifanekiso ibekwe endaweni yokuba ibhodi yentloko iya kuya phi, incanyathiselwe eludongeni. Ujoliso luya kubakho kwimifanekiso.
Into ekufuneka uyenzile kukukhetha iifoto kakuhle ukuze yonke ihambelane.
Umsebenzi weebhloko eziphambili
Zibalasele ekuphuculeni indawo ukuya kwelona liphezulu. Ezi bhodi ziphambili zinezishelufu ezakhelweyo kunye neendawo zokugcina, ezenza ukuba zilungele abo banezinto ezininzi emakhayeni abo. Ke, ukongeza, baya kuba nakho ukufumana yonke into esiyifunayo ngesandla ngalo mzuzu wokuphumla.
Iintloko zeentloko ezinephepha lodonga
Kule meko, unokwenza iphepha lodonga kuphela kwinxalenye yodonga eya kuthi ihambelane nebhodi yebhodi okanye lonke udonga lucutha icandelo lebhodi yebhodi nge-motif eyahlukileyo. Kule meko, unokukhetha iphepha elilungele isitayile sakho kwaye into efanelekileyo kukuba ungayitshintsha amaxesha amaninzi kangangoko ufuna ukuba nje xa ulumkile xa ususa.
Ishelfu edityanisiweyo okanye ishelufu
Ungayitshintsha kwakhona ibhodi yakho yentloko ngeshelufu okanye ishelufu okanye izinto ezininzi ukuze usebenze njengendawo yokugcina. Unokwenza ishelufu elidityaniswe eludongeni ukubeka iifreyimu zemifanekiso, Yila izinto okanye njengezikhumbuzo. Ukongeza, unokubeka isibane apho ukuze ungasebenzisi isithuba kwitafile yakho esecaleni kwebhedi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ikhaya » Ezona zimvo zibalaseleyo zokuhombisa ibhodi eyintloko yebhedi yakho
Izibonelelo ze-Eco zezindlu ezincinci